ओलिको अर्को यस्तो ठूलो फाइल खोल्दै मन्त्री आले ! - Compaq News
ओलिको अर्को यस्तो ठूलो फाइल खोल्दै मन्त्री आले !
काठमाडौ। बतास समूहको पञ्जाबाट नारायणहिटी दरबार संग्राहलय जोगाएका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगममा फायर खोल्ने भएका छन्। वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने लबिङ गर्दै आएका समूहलाई कारबाही गर्न आले तम्सिएका छन्।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने लबिङ गर्दै आएका तीनजना सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बाटो पर्यटन मन्त्री आलेले सुरू गरेका छन्। बिहीबार भएको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा तीनजना सञ्चाकललाई प्रवेश नै गर्न नदिएर यसको सुरुवात गरिएको छ।
बिहीबार भएको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा ७ जना सञ्चालकमध्ये ४ जनाले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री आलेको निर्देशनमा निगम सञ्चालक समिति सदस्यहरु डिमप्रसाद पौडेल, ईश्वरी पौडेल र फुर ग्याल्जे शेर्पालाई सञ्चालक समितिमा निषेध गरिएको बताइएको छ।
मन्त्री आलेले तीन पटक सञ्चालक समितिमा उपस्थित नभएको देखाएर सञ्चालक समितिबाट उनीहरूलाई कारबाही गर्न लागेका छन्।तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गरेका डिमप्रसाद पौडेल महाप्रबन्धक हुँदा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान निरन्तर लबिङ गर्दै आएका थिए ।
उनको अस्वाभाविक व्यवहारका कारण कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए।उनीहरुले पुनः बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण नबनाएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
यसको बोधार्थ पर्यटन मन्त्री, सचिव, अर्थ मन्त्रालय राजश्व सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पठाएका छन् ।यता, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने तीनैजना सञ्चालकलाई समितिको बैठकबारे जानकारी गराइएको बताएका छन्